Tena zava-dehibe ve ny sarin'ny mombamomba anao LinkedIn? | Martech Zone
Taona maro lasa izay, nanatrika fihaonambe iraisam-pirenena aho ary nanana fiantsonana mandeha ho azy izy ireo izay ahafahanao maka sary sy maka sary vitsivitsy. Nahavariana ny vokatra… ny faharanitan-tsaina tao ambadiky ny fakan-tsary no nahatonga anao nametraka ny lohanao ho lasibatra, avy eo nanitsy ho azy ny jiro, ary boom… nalaina ny sary. Tsapako ho toy ny supermodel dang nivoaka izy ireo…
Saingy tsy izany tena izaho. Tsy supermodel aho. Lehilahy be fitia, maditra sy falifaly aho ary tia mitsiky, mihomehy ary mianatra amin'ny hafa. Roa volana no lasa ary niara-nisakafo tamin'ny zanako vavy aho ary nisy vehivavy iray fantatro nipetraka niresaka taminay. Ny zanako vavy… izay tsy afaka mamela toe-javatra tsy ho voasokajy… naka sarin-tsika teo am-pihomehezana.
Tiako ity sary ity. Mila hetezana volo aho, hazo mafana ny lamosina, tsara ny jiro, ary manao t-shirt burgundy tsotra aho.. tsy misy akanjo na karavato. Ity sary ity is izaho. Rehefa tonga tany an-trano aho, dia nopotehiko ilay izy ary napetrako teo an-tsaiko LinkedIn profile.
Jereo sy hifandraisanao amin'i Douglas ao amin'ny LinkedIn
Mazava ho azy fa tsy mpiasa ao amin'ny LinkedIn fotsiny aho. Mpandahateny aho, mpanoratra, mpanolo-tsaina ary tompona orinasa. Tsy mandeha ny herinandro fa tsy mifandray amin'ny mpiara-miasa, mpanjifa, na mpiasa aho ao amin'ny LinkedIn. Tsy azoko tsinontsinoavina mihitsy ny maha zava-dehibe ny sarinao mombamomba anao. Alohan'ny hihaonantsika dia tiako ny hahita anao, hahita ny tsikinao ary hijery ny masonao. Tiako ny hahatsapa ho sariaka, matihanina, ary olona tsara hifandraisana.
Afaka maka izany amin'ny sary ve aho? Tsy izy rehetra ... fa afaka mahazo fahatsapana voalohany aho!
Misy fiantraikany amin'ny fahafaha-manakarama anao ve ny sary LinkedIn?
Adam Grucela sy Passport-Photo.online Namaly ity fanontaniana manan-danja ity miaraka amin'ny torohevitra miavaka miaraka amin'ny antontan'isa fanohanana amin'ity infografika ity. Ny infografika dia mikasika ireo lafin-javatra manan-danja sasany amin'ny sarin'ny mombamomba ny LinkedIn… ao anatin'izany ireo toetra tsara indrindra:
Charisma – ataovy tia sy matoky anao ny mpitsidika.
matihanina - ampifanaraho amin'ny niche anao ny sary.
Quality - sary nalaina ihany no mampakatra.
toetra – ampahafantaro azy ireo bebe kokoa ianao.
Manome toro-hevitra vitsivitsy izy ireo - toy ny fandraisana mpaka sary matihanina, mampiasa sary avo lenta, miantoka fa matihanina, mampiasa fihetsika tsara ary mampiseho ny karisma. manome saina mena ihany koa izy ireo:
Aza mampiasa endrika hita amin'ny ampahany.
Aza mampiasa sary ambany fanapahan-kevitra.
Aza mampiasa sary vakansy.
Aza mampiasa sary tsy tena izy.
Aza mampiasa sarin'ny orinasa mihoatra ny sarin'ny tena manokana.
Aza mihoa-pefy loatra amin'ny fanaovana tsinontsinona.
Aza mampiasa sary tsy misy tsiky!
Ny infografika koa dia mampahafantatra anao fa tsy ny sarinao no zava-drehetra… ny fanatsarana ny mombamomba anao LinkedIn manontolo dia zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny fahafahanao mifandray sy hokaramaina. Aza hadino ny mamaky ny lahatsoratray hafa sy ny infografika miaraka aminy, anisan'izany ity torolalana amin'ny antsipiriany momba ny fanatsarana ny mombamomba anao LinkedIn, ary koa ireto fanampiny ireto Torohevitra momba ny mombamomba ny LinkedIn.
Fa Halako ny Maka sary
azoko fa ny sarinao mombamomba anao tsy ho anao! Raha tsy tianao ny maka sy mampiasa sarinao, dia anontanio ny namana tsara atokisanao. Tsy misy toy ny fakana mpaka sary sy namana hitondra anao, maka sary am-polony vitsivitsy, ary avelao ny namanao atokisanao hifidy ny sary hampiasaina. Fantatr'izy ireo ianao! Ho fantatr'izy ireo hoe iza no tena mahavita asa tsara amin'ny fisoloan-tena anao.
Tags: douglas karrSary torohayLinkedInlinkedin headshotsary linkedinlinkin saryprofil linkinsarysary mombamombatoro-hevitra momba ny sary profil